Ciidamada Dowlada oo joojiyey Lacagihii lagu qaadi jirey Excontrolka Afgooye Howlgalana ku qabqabtay Dhilinyaro ......( DAAWO SAWIRADA ) | Somalisan.com Home
Ciidamada Dowlada oo joojiyey Lacagihii lagu qaadi jirey Excontrolka Afgooye Howlgalana ku qabqabtay Dhilinyaro ......( DAAWO SAWIRADA ) 12/2/2012 3:42:00 P
taliyaha ciidmada howlgalka fulinayay gaashaanle Nuur Xasan Maxamuud ( Nuur jareer )iyo Afhayenka dowlada fedraalka u qaabsilasan nawaxaaigan Axmed Yare ayaa saxaafad uga warbixiayay howlagalada. Isbaaradii weyneyd ee tiilay Ex-control Afgooye ayaa maanta si rasmi ah looga qaaday halkaasi kadib markii isbaarooyinkii kale ee yiilay gudaha magaalada Muqdisho gebi ahaamba la qaaday marka laga reebo iyada.
Qaadista Isbaarooyinka yaala gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa amar dhawaan ka soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxana ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowlada iyagoo fulinaaya amarkaasi inay ku guuleysteen inay qaadaan gebi ahaamba isbaarooyinkii lacagaha looga qaadi jiray gaadiidka inay qaadaan.
Shir jaraa’id oo saraakiisha ciidamada dowlada ay ku qabteen Ex-controol Afgooye ayaa waxa ay ku sheegeen inay qaadeen isbaaradii taalay Ex-controol oo aheyd isbaaradii ugu danbeysay ee laga qaado magaalada Muqdisho.Ciidamada dowlada Fedaraalka Soomaaaliya oo howlgalo Amaanka Lagu sugayo Ka sameeyay Wadada Isku Xirta Muqdisho Iyo Afgooye.
Goobtii lacagaha lagu qaadi jirey ayey ssaxaafada tuseen oo cidlo ah Iyadoo dhawaanahaani ay isasoo tarayeyn cabshada ka imaanysa gadiidleeyda iyo rakaabka ku safara wada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degamada afgooye oo iyagu ka cabnaya dhac ay kala kulmaan rag ku labisan dareeyska ciidnaka dowlada ayaa waxaa wadaasi howlgalo ka bilaabay ciidamo ka tirsan dowlada fedraalka iyadoona ay soo qabqabteen dhowr kamid ah raga jidgooyooyinka dhigta wadadaasi.
sidoo kale waxaa iyana la qaaday barti kontorool ii tiilay isgoyska ex kontorol afgooye oo iyadu lacaga Xad dhaaf ah looga qaadi jiray gadiilayada u kala gooshta muqdisho afgooye iyasdoona qaadista kontaroolkani lagu macneeyay in ay ka danbeeysay amarkii madaxweynaha oo ahaa in aan wax jidgooya ah lagu arag guud ahaan magaalada .
Taliyaha ciidmada howlgalka fulinayay gaashaanle Nuur Xasan Maxamuud ( Nuur jareer )iyo Afhayenka dowlada fedraalka u qaabsilasan nawaxaaigan Axmed Yare ayaa saxaafad uga warbixiayay howlagalada.
Inkastoo ay jiraan howlwo –galada ay ciidamada dowladu ka sameeyanayayan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa hadana waxaa isa soo taraya cabashada ka imaanayasa gadiidleeyada u kala gooshata qeybo kamid ah gobolka shabeelaha hoose kuwaa oo la kulmo dhac iyo lacag baad ah oo ay ka qaadaan rag ku libisan dareeyska dowlada .